Imbali yeSamurai eJapan
Imbali kunye neNkcubeko Iimfazwe kunye neemfazwe
Ukusuka kwiiTayki Reforms ukuya kubuyiselwa kweMeiji
Ama-Samurai, iklasi lamadoda anamandla asebenza kakuhle, ngokukhawuleza akhula eJapan emva kokuguqulwa kwe-Taika ye-AD 646, eyabandakanya ukubuyiswa komhlaba kunye neerhafu ezininzi ezijoliswe ekuxhaseni ubukhosi bobuTshayina obukhulu. Ngenxa yoko, abaninzi abalimi abancinci kwakufuneka bathengise umhlaba wabo kwaye basebenze njengamafama aqeshisayo.
Okwangoku, abambalwa abakhulu beempahla baxhamla amandla kunye nobutyebi, benza i- system ye-feudal efana neYurophu yangaphambili , kodwa ngokungafani neYurophu, amakhosikazi aseJapan ayedinga amaqhawe ukukhusela ubutyebi bawo, abelethe i-Samurai warrior-okanye "bushi."
I-Early Feudal Era uSamurai
Amanye ama-Samurai abezihlobo zabanini-mhlaba ngelixa abanye beqeshwe ngamakrele. Ikhodi yamamurayi igxininise ukunyaniseka kwindoda yomntu, nangakumbi kwintsapho yokunyaniseka. Imbali ibonisa ukuba ama-Samurai athembekileyo ayedla ngamalungu omndeni okanye abaxhomekeke kwiimali zabo.
Ngama-900s, abalawuli ababuthathaka be-Heian Era ka-794 ukuya ku-1185 balahlekelwa ukulawulwa kweendawo zaseJapan zasemaphandleni, kwaye ilizwe liye lahlaselwa ngumvukelo. Ngenxa yoko, umbusi ngokukhawuleza wayesebenzisa amandla kuphela ngaphakathi kwinqununu, aze awele ilizwe, iqela leqhawe liye lafudukela kulo ukuzalisa amandla okucima. Emva kweminyaka yokulwa nokuseka umthetho we-shogunate kwiindawo ezininzi zesizwe esiqithi, ama-Samurai ngokuphumelelayo abambelele kumkhosi wamajoni kunye nezopolitiko ngaphezu kweYapan kwiminyaka eyi-1100 yokuqala.
Umgca obuthathaka obumpofu wanikwa umonakalo obulalayo kumandla akhe ngo-1156, xa uMbusi uToba efa engenalo umlandeli ocacileyo. Oonyana bakhe, uSutoku kunye ne-Go-Shirakawa, balwela ukulawula kwimfazwe yombutho ebizwa ngokuba yi-Hogen Rebellion ka-1156, kodwa ekugqibeleni, bobabini babeza kuba ngabalawuli kwaye i-ofisi yezobukhosi yalahlekelwa onke amandla ayo aseleyo.
Ngethuba lemfazwe yombango, iMiamoto neTaira yamaqela aseSamra aphakama kwaye alwa omnye kwi-Heiji Rebellion ye-1160. Emva kokusinda kwabo, i-Taira yayisungula urhulumente wokuqala olawulwa ngu-Samurai kunye no-Minamoto oyitshitshisiweyo yaxoswa kwi-capital yaseKyoto.
I-Kamakura kunye ne-Early Muromachi (Ashikaga) Iiperiods
Lezi zizwe zombini zalwa kwakhona kwi- War Genpei ukusuka ngo-1180 ukuya ku-1185, eyaphela ekunqobeni iMinamoto.
Emva koko, u-Minamoto noYoritomo wamisa i- Kamakura Shogunate , kunye nomlawuli njengento ebonakalayo nje kwaye i-Minamoto clan yalawula iJapan kude kube ngo-1333.
Ngo-1268, kubonakala ingozi yangaphandle. UKublai Khan , umbusi waseMongol waseYuan China , wafuna inkokhelo evela eJapan, kodwa uKyoto wenqaba kwaye amaMongol ahlaselwa ngo-1274 ngeenqanawa ezingama-600, kodwa ke, inqabana, i-typhoon yabhubhisa i-armada yabo, kwaye i-second-flight invasion e-1281 yadibana nayo.
Nangona uncedo olusisiseko oluvela kwimvelo, ukuhlaselwa kweMongol kuxabisa kakhulu iKamakura. Ayikwazi ukunikela umhlaba okanye ubuncwane kubaphathi beSamurai ababethelela ukukhusela eJapane, i-shogun ebuthathaka ijongene nomngeni ovela kuMbusi Go-Daigo ngo-1318, ikhupha umbusi ngo-1331 eyabuya yaphanga iShogunate ngo-1333.
Ukubuyiselwa kwaKemmu kwamandla omkhosi kwaphela iminyaka emithathu kuphela. Ngo-1336, i-Ashikaga Shogunate phantsi kwe-Ashikaga Takauji iphinda ibuyisele umgaqo we-Samurai, kodwa yayingenamandla kunokuba iKamakura yayiye. Iinqununu zengingqi ezibizwa ngokuthi " daimyo " zakhupha amandla amakhulu, zixubusha kwi-shogunate.
Kamva iMaromachi Ixesha kunye nokubuyiselwa kweNkundla
Ngowe-1460, ii-daimyos zazingayigcinanga imiyalelo evela kwi-shogun kwaye ixhasa abahluleli abahlukeneyo kwisihlalo sobukhosi somkhosi.
Xa i-shogun, u-Ashikaga Yoshimasa, yashiya ngo-1464, imbambano phakathi kwabaxhasi bomntakwabo omncinci kunye nendodana yakhe yatshitshisa kakhulu ingxabano phakathi kwe-daimyo.
Ngowe-1467, le ngxabano yavela kwiminyaka eyi-10 ye-Onin War apho kwafa amawaka kunye neKyoto yatshiswa phantsi, kwaye yakhokelela ngqo kwiJapan "yeMfazwe yeeMerika," okanye iSengoku . Phakathi kowe-1467 no-1573, ii-daimyos ezahlukahlukeneyo zakhokela iintsapho zabo ekulweni nokulawula kolawulo lwamazwe phantse kuwo onke amaphondo.
I-Warring States i-Period yaqalisa ukufikelela ngasekupheleni ngowe-1568 xa i-battlefield i- Oda Nobunaga yatshathisa ezinye i-daimyos ezinamandla, zangena eKyoto, kwaye yayithandayo, i-Yoshiaki, ifakwe njenge-shogun. UNobunaga wachitha iminyaka eli-14 ezayo ekutshintsheni amanye ama-daimyos kunye noxinzelelo lwamavukela-mbuso ngamaonki aseBuddha.
Inqaba yakhe enkulu yaseAzuchi, eyakhiwe phakathi kwe-1576 no-1579, yaba ngumqondiso wokuhlanganiswa kweJapan.
Ngowe-1582, uNobunaga wabulawa ngumnye wabaphathi bakhe, Akechi Mitsuhide. UHideyoshi , omnye uwonke-jikelele, wagqiba ukudibanisa waza wabusa njengekampaku, okanye i-regent, ehlasela eKorea ngo-1592 no-1597.
I-Tokugawa Shogunate yexesha le-Edo
U-Hideyoshi wayefuduse umkhombe omkhulu kwindlu yaseTokugawa kwiindawo ezungeze iKyoto ukuya kwingingqi yeKanto empuma yeJapan. I-Taiko yafa ngowe-1598, kwaye ngo-1600, uTokugawa Ieyasu wayinqobile i-daimyo eyayingummelwane wayo e-Edo, eyayiza kuba iTokyo.
Indodana ka-Ieyasu, uHidetada, yaba ngumthunzi welizwe elimanyeneyo ngo-1605, esetyenziswe kwiminyaka engama-250 yokuthula kunye nokuzinza kweJapan. Amanqatha aseTokugawa aqinileyo atyhila ama-Samurai, abaphoqele ukuba bakhonze amakhosi abo kwiidolophu okanye bayeke iinkemba kunye neefama. Oku kwaguqula abadlali beliqela kwiklasi ezuze iindawo ezizimeleyo.
Ukubuyiselwa kweMeiji kunye nokuphela kweSamurai
Ngowe-1868, ukubuyiselwa kweMeiji kwakubonisa ukuqala kokuphela kwamaSamamu. Inkqubo ye-Meiji yolawulo lomgaqo-siseko yayiquka ukuguqulwa kwentando yesininzi njengemida emiselweyo kwi-ofisi yoluntu kunye nokuvota okuthandwayo. Ngokuxhaswa luluntu, uMlawuli waseMeiji wasusa amaSamra, wanciphisa amandla e-daimyo, waza waguqula igama likhulu ukusuka e-Edo ukuya eTokyo.
Urhulumente omtsha wadala umkhosi obhalisiweyo ngowe-1873, kwaye amanye amagosa athatyathwa kwii-samamura zangaphambili, kodwa abaninzi bafumana umsebenzi njengamapolisa.
Ngomnyaka we-1877, i-Samurai yaseburhulumenteni yamsindo yavukela uMeiji kwi- Satsuma Rebellion , kodwa yalahlekelwa iMfazwe yaseShiroyama kunye nexesha lama-Samurai laphelile.
Inkcubeko kunye neZixhobo zeSamurai
Inkcubeko yamaSamamu yayisekelwe kwingcamango yebhasido , okanye indlela yeqhawe, apho iindawo ezisemgangathweni zihloniphekile kwaye zikhululeka ekukholweni kokufa. Ama-Samurai ayenelungelo lokusemthethweni ukuba anqumle nayiphi na imvelaphi eyahluleka ukumhlonela-okanye yakhe-ngokufanelekileyo kwaye yayicatshangelwa ukuba ifakwe umoya womoya we-bushido, ukulwa nokuhlonela inkosi yakhe, nokufa ngokuhloniphekileyo kunokuzinikezela.
Ngenxa yokungahloneli ukufa, inkolelo yaseJapane ye- seppuku yaguquka apho yawayisa amaqhawe - kwaye ihlazisa abaphathi bamagosa - bayazibulala ngokuziqhayisa ngokuzikhukhumeza ngokwabo ngekrele elifutshane.
Ama-Samurai asekuqaleni babengabaculi, balwa ngeenyawo okanye bahamba ngehashe benemijelo ende kakhulu (yumi) kunye neenkemba ezisetyenziselwa ukuphelisa izitha ezonakaliswe. Kodwa emva kokuhlasela kweMongol ka-1272 kunye no-1281, ama-Samurai aqala ukusebenzisa ngakumbi iinkemba, izibonda zifakwe ngamacenge ajikayo abizwa ngokuba yi-naginata, kunye nemicumu.
AmaSamurai amaqhawe ayembethe iinkemba ezimbini, kunye ndawonye ngokuthi "daisho -" ende kunye nefutshane "-kuyi-katana kunye ne-wakizashi, eziye zavinjelwa ekusebenziseni nabani na ogcina i-Samurai ngasekupheleni kwekhulu le-16.
Ukuhlonela uSamurai ngeNtsomi
IJapane yanamhlanje imhlonela imemori ye-Samurai, kwaye i-bushido isayikhathaza isiko. Namhlanje, nangona kunjalo, ikhowudi yama-Samurai iyafakwa kumagumbi eebhodi ezinkampani kunokuba kusemfazweni.
Kwaye ngoku, wonke umntu uyayazi ibali le- 47 uRonin , "iindaba zelizwe" zaseYapan. Ngo-1701, i-daimyo uAsano Naganori yadonsa intonga kwindlu ye-shogun waza wazama ukubulala iKira, igosa likarhulumente. U-Asano wabanjwa, kwaye unyanzelekile ukuba enze i-seppuku. Kwiminyaka emibini kamva, amashumi amane anesixhenxe kuma-Samurai akhe azingela iKira aze ambulale, engazi izizathu zika-Asano zokuhlaselwa igosa. Kwakwanele ukuba ufuna uKira afe.
Ekubeni i- ronin yayilandele i-bushido, i-shogun yabavumela ukuba benze i-seppuku endaweni yokubulawa. Abantu basondeza isiqhumiso kumangcwaba e-ronin, kwaye ibali lenziwe libe yimidlalo nemidlalo.
Iimbambano: iMfazwe yaseMontgisard
Imfazwe Yesizwe YesiNgesi: iMfazwe yaseMarston Moor
Ezemidlalo - IsiJapane Isigama
'Ngubani ozoyika uVirginia Woolf?' Uhlalutyo lwaBantu
Ukuqaphela iziganeko zokuLawula nokuLawula abafundi
Ukuqonda iMfutshane kwiFizikiki
Indlela yokuThabisa iClay Candy
Ukunxibelelana phakathi kwamaFomu